Emebelarị ụdị nke Git 2.27 ọhụụ ma ndị a bụ mgbanwe ya | Site na Linux
Iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe akụkọ ihe mere eme na iguzogide mgbanwe na ịsị, a na-eji ihe eji eme ihe nke akụkọ ihe mere eme niile gara aga na nkwenye ọ bụla na ntinye aha dijitalụ nke ndị mmepe mkpado na nkwenye nwekwara ike ikwenye.
Na nso nso wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke Git 2.27.0 kesara usoro nchịkwa nchịkwa.N'iji ya tụnyere nke gara aga, mbipụta ọhụrụ ahụ nakweere mgbanwe 537, kwadebere ya na nsonye nke ndị mmepe 71, nke 19 sonyere na nke mbụ na mmepe
Git 2.27.0 Key New Atụmatụ
Na ụdị ọhụrụ a nke Git 2.27.0, akagbuola ndabara nke ụdị nke abụọ nke usoro nkwukọrịta Git, nke a na-eji mgbe ijikọ onye ahịa na ihe nkesa Git. Amabeghị usoro ahụ, mana ọ dị njikere maka ojiji na ndabara n'ihi njirimara nke amị amị na-achọ iche iche.
Mgbe n'aka nke ọzọ, iji zere mgbagwoju anya na nke a ọhụrụ version iwu "git kọwaa" mgbe niile jiri ogologo mmepụta mode ("- Ogologo") ma ọ bụrụ na achọpụtara mkpado ejiri superseded metụtara mmekọ. Dị ka ọ dị na mbụ, egosiputara mbinye aka ma ọ bụ aha edeturu na-akọwa ịhe ọbụlagodi na akpọgharịrị ya ma ọ bụ kwaga na ọkwa "refs / tags /".
Na-agba ọsọ "git sere" ugbu a na - adọ aka na ntị ma ọ bụrụ na nhazi agbanwe sere.rebase na-adịghị n'ụzọ doro anya setịpụrụ na nhọrọ "- [no-] tojupụtara" ma ọ bụ "–ff-naanị" ha anaghị emetụta. Iji gbochie ịdọ aka ná ntị maka ndị na-agaghị akpagbu, ịnwere ike ịtọ mgbanwe na ụgha.
Ha nwere gbakwunyere ọtụtụ ihe ọhụrụ «git melite-ref –stdin"karịa ekwe ka njikwa nke njikọta melite njikọtaDịka ọmụmaatụ, iji mejuputa usoro njikọ atọm nke abụọ gafere n'ọtụtụ ebe nchekwa.
Ọzọkwa, nhọrọ a ga - emezigharị nke git weghaara. Edekọtara nhọrọ ndị yiri ya ndị a na-ekwughị n'elu ma wega ha nnabata nke nhọrọ efu.
Agbakwunyere ike igosipụta Site na: na Isiokwu: nkụnye ndị eji isi mee: enweghị mgbanwe na usoro ị ga - ebugharị na-enweghị ịtụgharị mkpụrụedemede ndị na - anọghị na koodu ASCII.
Nhọrọ "–Show-pulls" agbakwunyere na "git log", na-enye gị ohere ịhụ ọ bụghị naanị ịmegharị mgbanwe ndị ahụ, kamakwa itinye aka iji jikọta mgbanwe ndị a site na ngalaba dị iche.
The nhazi nke mmekọrịta ndenye na niile mmiri e n'otu na fflush () oku e kwukwara mgbe egosiputa ọsọ ọsọ arịrịọ, ma tupu agụ ọrụ.
Na "git rebase" a na-ahapụ ya ka ịtinyeghachi mpaghara niile enweghị akpa ịrụ ọrụ «leleeỌbụna ma ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ha dị na mbụ.
Ejiri 'ezi' dochie uru ihe nhazi a bu 'pack.useSparse' ka odi na otutu iji mee ka ihe ndozi di nma dika nke mbu.
Agbakwunyere otu nhọrọ iji hazie njikọ SSL mgbe enweta site na proxy.
Ihe omuma a gosiputara mgbe eji ihe nzacha "di ocha" na "smudge" agbasawanyewo. Dịka ọmụmaatụ, a na-egosipụta ihe osisi-ish ugbu a, nke blob gbanwere na-apụta.
Mgbakwunye "–autostash" na "git merge".
Ọdịmma ndenye ọta emelitere.
Gbakwunye -no-gpg-sign option to git rebase command to override the commit.gpgSign ntọala.
Agbakwunyere ndebiri ndị ọrụ dị iche maka akwụkwọ Markdown.
Ewepụrụ mmachi mwepu maka ụzọ niile na ndebiri ụgwọ dị ala na-eduga na osisi ọrụ efu.
Ọrụ "git restore --staged –worktree" ugbu a na ndabara na-eji ọdịnaya nke "HEAD" alaka, kama igosipụta njehie.
Ọrụ gara n'ihu ịgbanwee na SHA-2 hashing algorithm kama SHA-1.
Reworked koodu na-emekọ ihe GnuPG.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Emeelarịrị ụdị Git 2.27.0 ọhụrụ ahụ ma ndị a bụ mgbanwe ya
Linux 5.7: ọhụụ ohuru ekpughere